Bakhshiishyo – CollegeBound Saint Paul
Koontada nuunnehaaga lacagtu ha u sii badato!
Hel lacag bilaash ah si aad nuunnehaaga uga caawiso kordhinta lacagta waxbarashada mustaqbalka!
Sidaad ku heli karto bakhshiishka nuunnehaaga ee markay koontadu u gaarto heerarka muhiimka ah, waa adigoo qeyb ka ah barnaamijka tacliinta sare ee CollegeBound Saint Paul, iyo adigoo ka qayb qaata hawlaha ee xoojinta qoyskaaga iyo ilmahaaga.
Lacagta Keydka Koowaad
Nuunnehaagu waxaa loo hayaa $50 oo ah lacagta kuleejka!
Nuunnehaagu wuxuu heli karaa lacag baskhsiish ah oo loogu kordhiyo koontada keydta ah!
Lacag-dhigis kasta oo ay sameeyaan xubnaha qoyska ama asxaabta, sida ayeeyo, awoowe, ama adeer.
Qoyska iyo asxaabta sidoo kale si toos ah ayey lacagta ugu ridi karaan koontada nuunnaha. Koontada nuunnaha waa mid lacag la geliyo oo keliya, marka lambarka koontada waxaad siin kartaa qof kasta oo lacag u gelinaya.
$10 Waa Lacag Lagu Helayo Soo-gelidda Intarnetka
Iska diiwaan geli CollegeBound Saint Paul oo eeg Koontada Keydka ee lacagta ilmahaaga ugu jirto marka ugu horreysa.
Sida lagu Helo Bakhshiishka Guji Bogga Diiwaangelinta Koontada Keydinta. Waa inaad haysato lambarka aqoonsiga nuunnehaaga si aad marka ugu horreysa uga diiwaan geliso bogga keydinta lacagta waxbarashada. Waxaad lambarka aqoonsiga ka heli kartaa kaarka koontada ilmahaaga ee ku jirta waraaqihii soo-dhaweynta ee laguu soo diray. Sida marka ugu horreysa loo galo intarnetka si aad u aragto koontada ilmahaaga waxay kuugu qoran tahay bogga 4-aad ee waraaqahaaga soo-dhaweynta.
$25 Bakhshiishka Dhalashada Koowaad
Dhalasho Wanaagsan! Hel bakhshiishkan marka nuunnehaagu gaaro hal ama 1 sano.
Sida loo Helayo BakhshiishkaWaxba uma baahnid inaad sameyso, barnaamijka ayaa bakhshiishka si toos ah u soo gelinaya koontada keydinta lacagta marka ilmuhu noqdo 1 sano jir.
Ka jawaab daraasad ah diiwaangelin oo la yiraahdo CBSP Family Survey ee aad ku arki doonto Koontada Keydinta Lacagta.
Sida loo Helo Lacag: Is-diiwaangeli ama gal intarnetka koontada Keydinta Lacagta si aad uga jawaabto daraasadda la yiraahdo CBSP Family Survey.
$50 Isku-qoridda Bakhshiishka
Isku-qoridda CollegeBound Saint Paul si aad u furato koontada nuunnehaaga.
Nuunneyaasha xaqa u yeesha barnaamijka keydsiga lacagta kuleejka CollegeBound Saint Paul waxaa la diiwaangeliyaa marka ay dhashaan, laakiin qoysas badan, diiwaanka dhalashada nuunnaha ayaa si toos ah u qarsoon marka hore. Arrintan waxaa ku jira nuunnaha waalidkood aysan isku guursan si sharci ah, nuunneyaasha ay hayaan qoysas lagu meeleeyey, ama nuunneyaasha ku dhasha meelo ka baxsan Saint Paul laakiin gadaal dambe ka soo dega.
Sida lagu Helo Bakhshiishka: Looma baahna in bakhshiishkan awgiis wax tallaabo ah loo sameeyo, barnaamijka ayaa go’aamin doona haddii aad xaq u leedahay.
$50 Lacagta Sinnaanta Gaar Ahaaneed
Nuunneyaasha ay dhaleen qoysaska dadweynaha taariikh ahaan aan deegaankooda la maalgelin ayaa heli doona lacag ah hal mar oo ah $50.
Deegaammada aan taariikh ahaan la maalgelin waa meelo taariikh ahaan lagu yareyn jirey lacagaha iyagoo aan maalgelin ka heli jirin dowladda, meheradaha iyo shariikadaha.
Sida loo Helo Bakhshiishka Is-diiwaangeli ama in la galo intarnetka koontada Keydinta Lacagta, oo buuxi Daraasadda Diiwaangelinta. Barnaamijka ayaa go’aamin doona qofkii xaq u leh iyadoo la raacayo macluumaadka dadku ku bixiyo daraasadda ama macluumaadka dadka laga helo markay isku qorayaan barnaamijka.
$50 Bakhshiish Dhaqaale Fiican
Sannadka kasta hel $50 markaad ka qeyb qaadato barnaamijyada ama waxyaabo lagu hagaajinayo nolosha dhaqaalaha qoysaska, sida barashada maaliyadda ama in laga qeybqaato barnaamij kor loogu soo qaado sumcaddaada. Sannadka 2020 waxaa sidoo kale la heli karaa bakhshiis lagu codsado gargaar degdeg ah oo sababtu tahay xanuunka faafaya ee COVID-19.
Sida lagu Helo Bakhshiishka Halkan guji oo ka eego faahfaahinta xaq loogu yeesho, in la isu gudbiyo goobo dadka caawiya, iyo sida lagu helo bakhshiishka.
$50 Lacagta Bakhshiishka Fayaqabka Carruurnimada
Sannadka kasta hel $50 markaad ka qeybqaato barnaamijyada ama aad sameyso wax kor u qaadi kara horumarka caafimaadka nuunnaha, sida in laga qeybqaato casharrada waalidnimada ama dhallaanka, ama in nuunnehaaga la geeyo wiisiteynta sannadka oo joogto ah.
Fadlan noo oggolow hal bil oo waxaad sugeyso ay ka muuqdaan koontada CollegeBound ee nuunehaaga. Bakhshiishku wuu is beddeli karaa sannad kasta oo waxay ku xiran tahay maalgelinta la heli karo.
Bakhshiishyada Xoojinta CollegeBound Saint Paul
Ha korodho koontada nuunnehaaga oo ku xirnow meelo kugu taageeraya dhaqaalaha iyo barbaarinta ilmaha.
Ujeeddada CollegeBound Saint Paul ma ahan oo kaliya in ilmahaaga lagu caawiyo habka tacliinta sare, laakiin sidoo kale waa in qoysaska lagu xiro meelaha barbaarinta iyo sidoo kale barashada maaliyadda iyo siyaabaha lagu gaaro isku-filnaansho dhaqaale ahaaneed. Waxaad heli kartaa $50 oo sannad kasta koontada la geliyo (oo ah taariikhda dhalashada ilmaha) si aad si ficil ah uga sameyso waxa la hiigsanyo.
$50 Bakhshiishka Dhaqaale Fiican
Sannadka kasta hel $50 markaad ka qeyb qaadato barnaamijyada ama waxyaabo lagu hagaajinayo nolosha iyo dhaqaalaha
Waa maxay waxyaabaha xaqa loogu yeesho Bakhshiish Dhaqaale Fiican?
Waxyaabaha aad ka qeyb qaadatay ilaa intii nuunnuhu dhashay ee loo furay koontada CollegeBound waa in lagu buuxiyo magaca mid ka mid ah waalidiinta ama masuulka u diiwaangashan ilmaha iska leh koontada lacagta waxbarashada ee CollegeBound.
Tusaaleyaasha barnaamijyada xaqa loo yeesho waa:
La-talin Dhaqaale ama Tababar
La-talinta Sumcadda ama Waxyaabaha Sumcadda Lagu Dhiso
Barnaamijyo Labanlaabaya Lacag-keydinta
Furashada koonto bangi oo cusub (mid caadi ah ama mid ah keydin)
Helidda Adeegyada Xareynta Canshuur-celiska oo Bilaashka ah (VITA ama mid ah Goob
Barnaamijyada horumarinta shaqaalaha ama adeegyada la talinta shaqada
Tababarro gaar ah oo lagu yeesho guri ama meherad
Helidda maalgelinta meherad yar, ama kaalmada lacag-bixinta, sida amaahda ama deeqaha
Barnaamijyo dheeraad ah oo xaq loogu yeelan karo bakhshiishka. Si aad u hubiso waxa aad xaq u leedihiin, soo garaac [651-266-8829] ama farriin u soo dir collegebound@ci.stpaul.mn.us].
Halkee baan ka heli karnaa barnaamijyada iyo adeegyada fiican ee maaliyadeed?
Hoos waxaa ku qoran ururro bixiya barnaamijyo la xiriira maaliyadda fiican, adeegyo, iyo goobo ku yaalla Saint Paul iyo Twin Cities ama labada magaalo:
Ilaa iyo Diseembar 31, 2020 waxaad sidoo kale heli kartaa $50 oo ah bakhshiishka Dhaqaalaha Fiican si aad u hesho ama aad u codsato kaalmo degdeg ah oo sababteedu tahay xanuunka faafaya ee COVID-19.
Tusaaleyaasha kaalmada degdegga ah ee xaqa loo yeesho waa:
Kaalmada Barnaamijyada RICE ee Ramsey County ee guryaha, cuntada, dhaqaalaha, shaqada ama taakuleynta meheradaha yaryar
Waxaa laga codsadaa magaalada City of Saint Paul Bridge Fund oo loogu tala galay Qoysaska ama Meheradaha
Lacag caddaan ah ama kalkaamo degdeg ah oo laga helo ururrada bulshada
Kaalmada cuntada, sida Kaarka Cuntada inta Xanuunku ku Faafayo Minnesota
Wixii macluumaad dheeraad ah iyo waxyaabo taageero u ah COVID-19, fadlan ka eego Magaalada Saint Paul Jawaabteeda COVID-19 iyo Shaqa-helidda, Guriyeynta iyo Arrimaha Qoysaska.
Sannadka kasta hel $50 markaad ka qeyb qaadato barnaamijyada ama waxyaabo aad ku kordhin karto koboca nuunnaha.
Waa maxay waxqabadyada xaqa loogu yeelan karo Bakhshiishka Fayaqabka Carruurnimada?
Waxyaabaha aad ka qeyb qaadatay ilaa intii nuunnuhu dhashay ee loo furay koontada CollegeBound waa in lagu buuxiyo magaca mid ka mid ah waalidiinta ama masuulka u diiwaangashan ilmaha iska leh CollegeBound.
WIC ama Barnaamijka Nafaqada Haweenka, Dhallaanka iyo Carruurta
Wiisiteynta Sannad Kasta
Headstart Goor Hore
Waxbarashada Qoyska ee Carruurnimada Hore (ECFE) iyada oo loo marayo Waxbarashada Bulshada ee Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul
Kooxaha Taageerada Waalidka, sida Club Mom iyo Club Dad
Adeegyada Booqashada Guriga Qoyska
In la helo barnaamijka Me & My Baby Brain Building Bag
Barnaamijka Daryeelka Isku-dhafan ee Uurka Khatarta Badan
Barnaamijyo dheeraad ah ayaa xaq loogu yeelan karaa bakhshiishka. Si aad u hubiso wax aad xaq u leedihiin, soo garaac 651-266-8829 ama farriin ku soo dir collegebound@ci.stpaul.mn.us.]
Taageerada Degmada Ramsey ee Qoysaska waxaa ka mid ah
WIC (Haweeney, Dhallaanka iyo Carruurta)
Booqashada Guriga Qoyska
Kooxaha Taageerada Waalidka
Kaalmada Xannaannada Carruurta
Ururka Nuunneyaasha Madowga Mareykanka
Head Start Goor Hore ee ururka Community Action Partnership of Ramsey iyo Washington Counties
Sida loo Helo Bakhshiish Xoojin kuu Noqda
Waxaad nala wadaagi kartaa caddeymaha ka-qeybgalka barnaamijka, sida koobbi ama sawirka farriin ah boostada intarnetka (email), warqad, caddeyn wax aad bixisay ama xiriir kale oo ah xafiiska hawsha.
Gudbi Foomka Xaqiijinta:
Haddii aadan haysan caddeyn, waxaad weydiisan kartaa xafiiska inuu xaqiijiyo ka-qeybgalkaaga ama manaafacaadka adigoo isticmaalaya Foomka Xaqiijinta.
Waxaad caddeynta bakhshiishka ku soo gudbin kartaa:
“Boostada Intarnetka (Email): Collegebound@ci.stpaul.mn.us”
Ku soo dheji: Ku soo dheji Kadinkaaga intarnetka ee Koontada Dhigashada Lacagta ee CollegeBound, marka aad soo gasho bogga